Top sies Abavelisi kunye Suppliers | China Top sies Factory
Amaqhina Top ziyilelwe ukutshatisa intloko, intamo insulators Polymer, imveliso yokwambathisa, post-uhlobo insulators ukuba umqhubi isicelo, ukusukela kwicala phezulu yokwambathisa. Yokwambathisa tie phezulu isetyenziswa ukwenzela ababhexeshi ezingenanto emoyeni izikhwebu kwi networks transmission ngamandla MV kunye neHIV. Tie top for yokwambathisa Polymer ezenziwe aluminiyam nesigqubuthelo ngentsimbi, izinto aluminium. Izinto kwamaqhina heliformed top ixhomekeke kuhlobo eziphathekayo umqhubi ukuba ayisetyenziswa, ACCC okanye ACSR. Tie eyenziweyo yokwambathisa phezulu zixhotyiswe Ukongezelela ngentambo rube ukunciphisa lingonakali of umqhubi kunye yokwambathisa.